Canabka madow waxa uu ka hortaggaa adkaanshaha halbowlaha dhiig mareenada - Horn Future
Canabka madow waxa uu ka hortaggaa adkaanshaha halbowlaha dhiig mareenada
Helene Hodak oo ku xeel-dheer nafaqada oo ka hawlgasha Xarunta Daraasaadka Beeraha ee Fransiiska ayaa xaqiijisay muhiimadda uu leeyahay canabka madow ama ka casaan-madowga ah awoodda uu u leeyahay inuu kaa difaaco cudurka (atherosclerosis) ee sababa baruurt ku ururta dhinacya halbowlayaasha dhiiga mareenada.
Waxa ay xeel-dheeradan ay faahfaahisay in canabku hodan ku yahay sonkorta,taas oo ka dhigaysa midho tamareed ku haboon dadaalka jidhka iyo maskaxda.
Waxa sido kale ay carabak ku adkaysay baahida loo qabo in la doorto canabka midabka madow leh kaas oo ay ku jiraan tiro badan oo vitamino iyo nafaqooyin ah.
Daraasad Maraykan ah ayaa sheegtay in maadada (Resveratrol) ee sida dabiici ah looga helo qolofta iyo iniinta canabka ay suurogal tahay in loo adeegsan karo si hore-umar loogu sameeyo daweeynta lagu dilo kansarka mindhicirka iyo ka hortagga haleelitaanka cudurkan.
Waxa daraasadan Maraykanku sido kale ay sheegtay in cabista 2 koob oo midhaha canabka ah muddo 6 bilood ah ay kaa caawinayso ka hortagga cudurka (Alzheimers)ka ee sababa tabar daro dhinaca hadalka iyo jidhka ah oo haleesha qofka.
« Benefits cheat who posed as a single mother to claim £102,000	» Sanad guurihii 4aad ee xasuuqii dilaaga Sisi ka gaystay Masar kadib afgambigii+video